Explicit sermons by ZAOGA Apostle trending on social media - AfricanSeer.com
by Bridget Makura 13/03/2018 11:28:00 0 comments 1 Views
ZIMBABWE Assemblies of God Africa (ZAOGA) apostle, Christopher "Makaps" Kapandura's video clips preaching are dominating on social media.
"I was anointed to preach good news to all nations that last week I was in South Africa and I am going to take the gospel to Mozambique this week," said Apostle Kapandura.
"Baba Guti vakandipa basa iri uye vakanditendera kunyora book and those doubting my messages let them get a copy and read what I preach about," said Apostle Kapandura.
"In that book I clearly explained how I came to use explicit language in my sermons and I do not feel shy but feel that I have clearly delivered a message to be understood by anyone.
"I am aware that people are circulating these messages on social media but I advise them to visit where I will be preaching so that they receive their salvation before they are taken by death.
"Some of the video clips were recorded by various organisations including private functions where I shared powerful messages.
"Many people love me including you that is why you decided to follow me from Harare to Chinhoyi asi ukanyora zvandisina kutaura ndinokuvinga kubasa kwako ikoko.
"My wife is fully supportive since she is one of our church leaders and we got married in 1985 and our wedding took place here at this Hunyani Assembly.
"I am comfortable to preach at any church if they invite me since I am no longer attached to any district or province ndinobata kwese kwese kunemasangano edu pasi rose," said Apostle Kapandura.